Film Die Series - Mpamatsy Series Series Film China, Factory –Jwell
Ny loha maty dia manana fantsom-pitetezana karazana fitetezana endrika V-rano miaraka amin'ny haitao shunt ary ny rafitra telozoro manamafy orina. Mampifangaro sosona sy manatsara ny maha-marina ny fizotran'ny fitrandrahana mba hamafana ny endrika M 'M' sy ny endrika fitobiana 'W' mahomby. Ny molotra maty ambony mampiasa karazana push-off manual-tuning tsara-molotra + mandeha ho azy tsara-mandahatra iray-molotra maty, ny fanitsiana ny elanelam-potoana dia 1mm, fanitsiana mandeha ho azy elanelam-potoana 300; Momba ny faritra fanaraha-maso ny molotra maty mandeha ho azy, dia mampiasa rafitra fanaraha-maso loop mihidy tanteraka mandroso sy ny mandeha ho azy ny rafitra fandrefesana dia mahatonga ny hatevin'ny vokatra ao amin'ny ± 2% marimarina, ny fandrefesana ny hatezerana an-tserasera dia mitily fanaraha-maso mandeha ho azy matetika, afaka mampiseho ny fandeferana matevina marina amin'ny vokatra. Amin'ny alàlan'ny programa informatika amin'ny fanodinana ny angon-drakitra, hevitra momba ny molotra maty manokana fanitsiana fanitarana hafanana baoritra, ary hahatsapanao ny fisokafan'ny hatevin'ny molotra maty ho an'ny famolavolana mandeha ho azy, ny hatevin'ny vokatra haingana sy mahomby. Ary manana scalability maty tsara izahay, araka ny filan'ny mpanjifa, mifanentana amin'ny sakany "anatiny sakany karazana sakana manitsy ny fitaovana "na" ny fitaovana fanitsiana ny sakany ivelany manakana ", ho afa-po tsara kokoa ny filan'ny mpanjifa amin'ny famokarana mahomby kokoa.
Ny lohany maty dia miendrika famokarana ambanin'ny 5000mm, ny hateviny eo anelanelan'ny 0.06 -0.18 mm CPP, PE, EVA, PVC, PET, PVB, PA, sarimihetsika tokana misy sosona na multilayer.